Olunjani usuku! | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 13, 2007 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Ndithe xa ndiphuma ndisiya emotweni yam ngale ntsasa, ndaphoswa ngesaqhwithi ngequbuliso ngumkhenkce. Khawufane ucinge ngemvula, iqabaka nje. Kwafuneka ndiqhekeze iqokobhe lomkhenkce emotweni yam (iFord 500) ndize ndicime malunga nee-intshi ezili-10 zekhephu eliwele phezolo. Abantwana bebesekhaya-isikolo sirhoxisiwe. Ndiyenzile ukuba isebenze ngaphandle kwengxaki enkulu (enkosi ukulunga kwayo AWD).
Ndikhuphele iibhloko ezi-4 ukuze ndisebenze kwikhephu kwaye bendidinwe kakhulu (ewe, ndiyazi… ukunciphisa umzimba!). Emsebenzini, ulungiselelo oluhle lweebhegels kunye neziqhamo zilindelwe abambalwa abanesibindi abazenzileyo. Kumgangatho onabanye abantu abangama-30, ndicinga ukuba ndingomnye wabayi-6 abenze ukuba baye eofisini. Ndihlala emazantsi e-Indianapolis kwaye iNorthside ibethwe ngenene! Ngokuhlwanje kukho impinda:
Pik ukusuka Ndinqwenela iTV:
I-Indianapolis sisixeko esihle xa sinekhephu. Uyilo kunye namatye ezikhumbuzo akhangeleka engaqhelekanga ngekhephu ngokubambelela kuwo. Ndinqwenela ukuba bendihambahamba nekhamera namhlanje… kodwa bekukho umsebenzi ekufuneka wenziwe.
Umsebenzi wawulucelomngeni lokwenene. Ndiyichithe imini kwiMiyalezo ekhawulezileyo kunye nomnxeba. Sineqela elisebenzayo leengcali eziqala ukwakha amandla ekukhululweni okukhulu ekuqaleni konyaka olandelayo. Ukungabinabo abanye ukuba bangangxameli izimvo kunye nezimvo zabo kwenza ukuba kube nzima ukuvelisa, ndiye ndazingcwaba kumaxwebhu kwaye ndenza iprototyping.
Ukukhwela ekhaya kwakuthe cwaka. Izitalato zingenanto, ndithathe isigqibo sokuthatha unyana wam, ityala, ukufumana amava okuqhuba kwikhephu. Sifumene indawo enkulu engenanto ngaphezulu kweenyawo zekhephu ndaza ndathi makenze idonathi, ukulahleka kolawulo lokuziqhelanisa, ukutyibilika kunye nokuqhekeza ngokukhawuleza ... wayemangalisiwe yindlela imoto eyayiphatha ngayo (njengokuba ndandinjalo)… ulawulo, kwaye yonke idrive drive inika ulawulo olungakumbi. Iyamangalisa. Wayeziqhelanisa nemizuzu engama-30 emva koko sahamba ukuba nje umntu uza kubiza amapolisa kwaye acinge ukuba siyamosha.
Simise isidlo sangokuhlwa ngokukhawuleza ndafika ekhaya ndaqala ukudlala nge-PHP ethile kwaye I-API yeTekhnoloji. Ezinye zeesampulu zekhowudi khange zichukunyiswe kwiminyaka kwindawo yabo (ingcebiso, ingcebiso). Ngokuphathwa kwe-PHP5 yeXML yendalo, ndiyathemba ukuba umntu uza kuhlaziya kungekudala. Ndabhala ikhowudi kodwa andafumana mpendulo zisemthethweni nge-PHP… ke ngoku ndikhathazekile kwaye ndiyibiza ngobusuku. Andikholelwa ukuba yi-API yabo… ndinokusika kwaye ndincamathisele isicelo sam kwisikhangeli ngaphandle kwemicimbi.
Ithemba lam kukwakha iwijethi emnandi ebonelela ngeprofayili yebhlog… inqanaba, izithuba zamva nje, ilifu lethegi, njl njl. Ukuze kube lula ukuyithumela kwibhlog yakho okanye ujonge umntu othile. Ndizakufika phaya, kodwa ndiyibiza ngobusuku. Uxolo ayisiyiyo le post iluncedo ngakumbi! Ndiza kubuyela endleleni kungekudala!
Ndizolala ndinyuke ngomso!
Ngaba idmoz ifile?
Feb 14, 2007 ngo-4: 39 AM
Ndijonge ulwazi oluthile malunga nokulandela umkhondo (yindlela endiyifumene ngayo indawo yakho) kodwa andikwazi ukuba lilize, ndibona ntoni apha kumzobo! Khange ndisebenze kude kangaka neRichmond, ke lonke eli khephu lijongeka limangalisa kum! Wowu! 🙂
Feb 14, 2007 ngo-8: 17 AM
Ngaba uyifumene into oyifunayo kwi-Trackbacks Maciek? Ndenze iposi Apha.
Enkosi ngokundwendwela! Sinesiphepho esihle seqhwa 'esivuthuzayo' namhlanje kodwa kufuneka sicace ngale mvakwemini.
Feb 14, 2007 ngo-11: 05 AM
Huh, ewe ndiyifumene into ebendiyifuna- enkosi. Ungandixelela ukuba kutheni iWP ingcono kuneSerendipity? Ndisandula ukuqala iblog yam kodwa ndisebenzisa isoftware yeSerendipity-uyazi?
[Ndivela ePoland, ngoku ndihlala eJamani - kum ezo zaqhwithi aziyonto ingaqhelekanga- kodwa kwindawo yakho kunqabile kakhulu- yonwabele !!!]
Feb 14, 2007 ngo-11: 36 AM
Ukungazi kakuhle SerendipityAndifuni ukukuyekisa ekusebenziseni. Ndingumntu othanda i-WordPress ngenxa yesakhono sokwenza ngokwezifiso kwaye ubukho bewebhu inayo. Ndicinga ukuba amanqaku ebhlogi yesoftware aya esiba ngokuqhubekayo nangaphezulu (iipings, i-trackbacks, ukuphawula, i-blogrolls, njl.), Ke ukuba uyayithanda-yiya yona!
Inqaku elinye endilifundileyo lalibambe iSerendipity ngokuhlonipha kakhulu kwaye inqaku lisetelwe ngokusondeleyo kwiWordPress, ke andiqinisekanga ukuba enye ibhetele kunenye.